[SOLVED] MICROSOFT DHINDA KUNE PDF ISIRI KUSHANDA - NYORO
[SOLVED] Microsoft Dhinda kune PDF Isiri Kushanda
Gadzirisa Microsoft Dhinda kuPDF Isisashande: Chimwe chezvakanakisa maficha nezve Windows 10 ndeye kudhinda kune PDF mashandiro apo vashandisi vanogona kupurinda mawebhusaiti avo, mafaera, jpg kana faira rezwi sefaira rePDF vachishandisa inbuilt PDF Printer neMicrosoft inonzi Microsoft Print to PDF. Nekudaro, mishumo iri kuuya yekuti iyo Printa kune PDF haisi kushanda paSystem yavo. Kana mushandisi akadhinda paPrinta kuenda kuPDF webhu bhurawuza inongoita isingateerere uye hapana kudhanilodha kufambira mberi kana kuchengetedza kubhokisi rehurukuro.
Vashandisi havaone chero chinobuda kana vadzvanya paPrinta kuenda kuPDF uye bhurawuza inochengeta iyo faira rePDF asi hapana kutaurwa kwokuti faira rakachengetwa kupi uye iyo yekuchengetedza kune dialog box haina kuoneka zvachose. Saka pasina kutambisa chero nguva ngatione kuti tingagadzirise sei Microsoft Kudhinda kuPDF Isisashande nerubatsiro rwepazasi-yakanyorwa matambudziko ekugadzirisa.
Maitiro 1: Tarisa Mushandisi Folda
Maitiro 2: Dzvanya ipapo Re-Gonesa iyo Microsoft Dhinda kune PDF chimiro
Maitiro 3: Gadza Microsoft Dhinda kuPDF seye default printer
Maitiro 4: Re-gadza Microsoft Dhinda kune PDF Dhirairi
Usati waita chero chinhu, tanga waenda kune inotevera dhairekitori:
C: vashandisi% zita rekushandisa%
Dhinda Windows Key + R wobva wanyora C: Users \_% zita rekushandisa% ndokurova Enter. Iye zvino tsvaga iyo faira rePDF rakashaika, kana iwe usati uchikwanisa kuwana iyo faira wobva waenda kune inotevera folda: C: vashandisi \_% zita rekushandisa% Zvinyorwa uyezve tsvaga iyo chaiyo faira.
1.Dzvanya Windows Key + R wobva wonyora chemagen.cpl uye rova ​​Enter kuti uvhure Zvirongwa uye Zvimiro.
2.Zvino kubva kuruboshwe-kurudyi menyu tinya Dzorera kana kuvhara maWindows maficha.
3.Scroll pasi wobva wamise bhokisi riri padyo ne Microsoft Dhinda kuPDF uye tinya OK.
4.Reboot PC yako kuchengetedza shanduko.
5.Next, zvakare tevera nhanho kubva 1 kusvika 3 asi ino nguva cheki bhokisi riri padhuze ne Microsoft Dhinda kuPDF.
6.Dzvanya Ok kuti uchengetedze shanduko uye wotangazve PC yako wozoona kana uchikwanisa Gadzirisa Microsoft Dhinda paPDF Isiri Kushanda Nyaya.
1.Dzvanya Windows Key + R wobva wonyora dzora maprinta (pasina makotesheni) uye rova ​​Enter kuti uvhure maDhijitari nemaPrinta.
2.Zvino tinya-kurudyi Microsoft Dhinda kuPDF uye wozosarudza Gadza seDefault Printer.
3.Dzorera PC yako kuti uchengetedze shanduko uye uone kana uchikwanisa Gadzirisa Microsoft Dhinda paPDF Isiri Kushanda Nyaya.
1.Dzvanya Windows Key + R wobva wonyora dzora maprinta (pasina makotesheni) uye rova ​​Enter kuti uvhure Midziyo uye maPrinta.
2.Now-tinya kurudyi paMicrosoft Printa kune PDF wobva wasarudza Bvisa mudziyo.
3 Paunenge wabvisa Microsoft Dhinda paPDF ipapo tinya Wedzera purinda kubva kumenyu.
4.Dzvanya Iyo yekudhinda yandinoda haina kunyorwa pazasi pe Wedzera dhijitari chidzitiro.
5.Checkmark Wedzera purinda yemuno kana yeinternet printa ine manyorerwo s uye tinya Inotevera.
6 Sarudza PORTPROMPT: (Yemunharaunda Port) kubva Shandisa chiteshi chiripo kudonha-pasi wobva wadzvanya Inotevera.
7.Next, kubva kuMugadziri ikholamu sarudza Microsoft kupfuura kubva paPrinta mapuramu sarudza Microsoft Dhinda kuPDF wobva wadzvanya Inotevera.
Sarudza Tsiva mutyairi wazvino wobva wadzvanya Inotevera.
9.Pasi pePrinta zita remhando Microsoft Dhinda kuPDF wobva wadzvanya Inotevera.
10.Click Pedzisa kupedzisa maitiro uye reboot yako PC.
Ndikwo iwe wakabudirira Gadzirisa Microsoft Dhinda kuPDF Isisashande asi kana uchine chero mibvunzo maererano neichi posvo saka inzwa wakasununguka kuvabvunza muchikamu chemashoko.
hapana odhiyo mune chrome windows 10
kudzima sarudzo dzekuvandudza
windows wont kugadzirisa kusvika 1903
windows 10 simudzira dema skrini ine cursor
maitiro ekutora pane kusawirirana